Ductile Iron Grooved Lokulinganisa Abavelisi & ababoneleli - China Ductile Iron Grooved Fitting Factory
Ukulahlwa kwemizi mveliso
Ductile Iron umngxuma Cover
Isimbumbulu / iSMC Cover Cover
Isiteshi seDreyina seKhonkrithi yokuhambisa amanzi
IAluminium Die Casting
Ingqele Ukuqinisa And Hot nasekuqiniseni
Socket Weld esisangqa
IWeld Neck Flange
Iinxalenye Machining Stainless
Aluminium Machining Izahlulo
Brass Machining Izahlulo
Stainless Ukunyathela Part
Ductile Iron anemiqolo Lokulinganisa
Umbhobho Brass neZilinganisi
Imveliso yePlastikhi yesiqhelo
Umzimba we-ductile wentsimbi
Jonga umzimba weValve
Umzimba wesango wevalve yentsimbi
Izinto eziSisiseko zoLwazi: Uqhagamshelo lwentsimbi: I-Welding yoFakelo oluNgezelelweyo lokuPakisha: Imveliso esemgangathweni yokuthumela kwelinye ilizwe: 1000pcs / ngosuku Brand: Ukuhamba kweMingda: Ulwandle, umhlaba, indawo yomoya ovela kuyo: i-Hebei, iSatifikethi sase China: i-ISO9001; i-2008 Port: Inkcazo yemveliso yaseTianjin ekuvelisweni kwezilinganisi ezigudileyo kunye nokudibanisa. Singenise iMelika Inductotherm yeQela lokuguqulela isiseko somlilo, iDenmark iDISA umgca wemveliso ngokuzenzekelayo, iJamani i-EIRICH pou ...
Izinto eziSisiseko zoLwazi: Uqhagamshelo lwentsimbi: I-Welding yoFakelo loLwazi olongezelelweyo: Imveliso esemgangathweni yokuthumela kwelinye ilizwe: 1000pcs / usuku lweBrand: Ukuhamba kweMingda: Ulwandle, umhlaba, indawo yomoya ovela kuyo: i-Hebei, iSatifikethi sase China: i-ISO9001; i-2008 Port: Inkcazo yemveliso yaseTianjin kunye nokufakwa kunika uqhagamshelo lombhobho olomeleleyo okanye oluguquguqukayo lweenkqubo zokukhusela umlilo ngamatywina athembekileyo kuluhlu lweemeko zangaphakathi zoxinzelelo.
I-Ductile yentsimbi yokuCutha ukuCutha iTe
Izinto eziSisiseko zoLwazi: Uqhagamshelo lwentsimbi: I-Welding yoFakelo oluNgezelelweyo lwePakethe: Imveliso esemgangathweni yokuthumela kwelinye ilizwe: 1000pcs / usuku lweBrand: Ukuhamba kweMingda: Ulwandle, umhlaba, indawo yomoya ovela kuyo: i-Hebei, iSatifikethi sase China: i-ISO9001; i-2008 Port: Inkcazo yemveliso yaseTianjin Sine-CE / I-ISO9001 / FM kunye nokuqinisekiswa kwe-UL kubandakanya ngaphezulu kwezinto ezingama-2000 kwaye sifaka isicelo sezinye izinto ezili-1000 ngo-2016 kwaye isixa-mali siya kufikelela kwizinto ezingama-3000 kulo nyaka. inkampani yethu ijolise ekuveliseni izixhobo ezilinganisiweyo kunye ...
I-FM / i-UL evunyiweyo ye-Ductile Iron Grooved efanelekileyo yokuThoba umnqamlezo
Izinto eziSisiseko zoLwazi: Uqhagamshelo lwentsimbi: i-Welding eyongezelelweyo yokuPakisha ulwazi: Imveliso esemgangathweni yokuthumela kwelinye ilizwe: 1000pcs / usuku lweBrand: Ukuhamba kweMingda: Ulwandle, umhlaba, indawo yomoya ovela kuyo: i-Hebei, iSatifikethi sase China: i-ISO9001; i-2008 Port: Inkcazo yemveliso yaseTianjin izixhobo ezithandwa kakhulu kwiinkqubo zokulwa umlilo, izixhobo zombhobho ezisetyenzisiweyo zisetyenziswa kakhulu ekulweni umlilo, umoya-moya, unikezelo lwamanzi, ilindle, isamente, ioyile kunye negesi ...
Lwedilesi: Gelan Building, No. 256 Xisanzhuang Street, Shijiazhuang, Hebei, China